Dhaqan ma loo leeyahey baxnaanin iyo daryeelka shinnida - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Lars Flygare iyo Wahib Mohamed xaafadda Seved. Sawirle: Ururka Hidde iyo Dhaqan
Dhaqan ma loo leeyahey baxnaanin iyo daryeelka shinnida
Wahiib: Maxaa diiday in malab la soo saaro
La daabacay fredag 21 november 2014 kl 16.13
Xaafadda Seved ee degmada Malmö ayaa ku talo jirta inay ku tallaabsato soo-saarka malab ku filan dhammaan carriga Skåne. Tallaabadaa ayuu ku dhaqaaqay urur soomaaliyeed oo ka aloosan magaalada Malmö, waa ururka Hidde iyo Dhaqan, sida uu noo sheegay Wahiib Maxamed oo ka mid ah dadyoowga aqoonta dheer u leh dhaqashada shinnida iyo soo saarka malabka ee ururka Hidde iyo Dhaqan:
Jimcadii ina dhaaftay bisha noveemberna ku beegnayd 14 ayaa xarriga laga jarey mashruuc middaa la xiriira ee socon doona muddo saddex sannadood ah, hase yeeshee xilligan lagu jiro oo uu bilowday qaboobihii ey shinnidu ka seexato howlaha soo saarka malabka:
- Shinnidu iminka way huruddaa. Laga bilaabo horraantii bishii oktoobar ayaannu shinnida u fasaxney iney seexdaan. Maadaama aaney jirin wax howl ah oo ey qaban karaan xilliga qaboobaha.
- Hawada ayaa qaboobaataym, marka haddii aaney seexan waa ey ku le'an, sida uu sheegay Wahiib Maxamed, kana mid ah shakhsiyaadka iminkaba faraha ku haya shinnida lagu dhaqo xaafadda Seved iyo Karlshammar.
Hase yeeshee uu mashruucan suurtagal ka dhigi doono in la helo boqol goobood oo lagu xannaaneeyo shinnida oo ka tir-san gobolka Skåne. Halka dhanka kale ey qayb ka noqon doonaan dhallaan fara badan iyadoona loo isticmaali doono malabka qaarkii sidii loogu sameeyn lahaa macmacaan. Iyadoona xafladdii furitaanka ee mashruuca lagu soo bandhigay qayb ka mid ah macmacaanka lagu talo jiro in dhallaanka loogu howl-geliyo sidii ey gacan uga geey-san lahaayeen. Basra Cusmaan, waxey ka mid aeyd dadyoowgii wax ka soo diyaariyey macmacaanka lagu soo bandhigey goobtii furitaanka ee mashruuca:
- Aniga iyo saaxiibaday Layla, waxaanu soo dubney noocyo kala duwan ee macmacaanka iyo buskudyada ka mid ah.
- Waxaan caawin doonnaa dhallaanka, sidii malab loogu dubi lahaa buskudyada, halkii laga isticmaali lahaa sokor. Malabku waa wax aad iyo aad u macaan xaqiiqdii, sida ay sheegtay Basra Cusmaan.
Xiisaha soo saarka malabka iyo bacriminta ayaa aad u hooseeya dalkan Iswiidhen iyadoona uu sheegay Wahiib Maxamed in 85% malabka dalkan lagu iibiyo laga keeno dalka dibaddiisa maxaa haddaba hor-taagan ayuu leeyahay inaannu halkabak u dhaqno shinnida oo aannu malab ka soo saarno?
Lars Flygare oo ka mid ah howl-wadeennada mashruuca, isla-markaana goob-joog ka ahaa xafladdii lagu daahfurayay mashruuca dhaqashada shinnida ayaa sidoo kale sheegay inuu mashruuca ka mid yahay qorshe lagu abuureyo waxa loo yaqaanno App, bogg ka mid ah bogagga shaashadda internetka - isagoona sidan ku sharraxay muhiimadda laga leeyahay app-ka
- Waxaa lagu baran doonaa sida loo bilaabi karo dhaqashada shinnida. Sida xayrta loogu isticmaali karo waxyaabo ama siyaabo kala duwan.
- Maxaa looga baahan yahay in loo soo iibsado kareemka kabaha lagu caseeysto, midka oogada la marsado iyo wixii la mid ah. Xayrtan ayaa loo isticmaali karaa wax walba, sida uu sheegay Lars Flygare, oo ku sugnaa goobtii daah-furka mashruuca shinni-dhaqashada ee xaafadda Seved ee magaalada Malmö.
Mashruucan shinnida oo socon doona muddo saddex sannadood ah, isla-markaana ayaa goolka laga leeyahay yahay sidii loo abuuri lahaa iskaashato ku shaqeeysa soo saarka malabka, isla-markaana ka haqab-tirta gobolka Skåne malabka,
Källa /P4 Malmöhus, Radio Sweden